Dhammaan iPhone ayaa loogu tala galay in ay helaan iMessages iyo farriimaha SMS si joogto ah labada. iMessages waxaa lagu tilmaamay goobooyinka buluug ah, halka fariimaha SMS si joogto ah waa show by goobooyinka cagaaran. Halkaa marka ay marayso qaar ka mid ah, aad iPhone laga yaabaa aan helin fariimaha qoraalka ah ama fariimaha qoraalka ah iPhone ma diraya. Aayadda ku xigeenka ayaa sidoo kale tahay mid run ah.
Haddii aad dhibaato noocan ah, ka dibna aad keligaa ma tihid. Waxaa jira dad badan oo isticmaala iPhone qaba noocan oo kale ah arrimaha aad. Dhowr users ka Bixin su'aasha ku saabsan sababaha ka dambeeya arrimahan. Maqaalkani waxa uu ku bari doonaa sida loo hagaajin dhibaatooyinka Fariin iphone.
Qeybta 1: Waa maxay sababta aan heli karin ama u soo dir SMS joogta ah iPhone?
Qeybta 2: Waa maxay sababta aan heli karin ama u soo dir iMessages
Xaaladda A kac laga yaabaa in meesha aad telefoon helo iMessages kaliya oo aan helin fariimaha qoraalka ah. Tani waa xaalad ceeb u baahan in xal deg deg ah, waaba intaasoo aad ku guul dareysato in ay la xiriiraan dadka aad. Xaaladani waxay noqon kartaa si niyad gaar ahaan marka ay jiraan wax degdeg ah oo aad u rabay inuu xidhiidhka ama haddii aad u sugayeen oo fariin muhiim ah.
Xaaladan waxa ay inta badan la xiriira in kalle. . Waxa ay u muuqataa inay saameyn ku yeelan dadka kuwa ku nool meelaha u degdeg ah la balaariyay
Qaar ka mid ah sinnaariyooyinka oo horseedi kara noocan oo kale ah xaalad yihiin;
Your iPhone laga yaabaa in aan loo qabo Mudanayaasha qoraalka ku saabsan qorshaha gacanta MTS a
laga yaabaa in aad sidoo kale leedahay galay lambarka taleefanka aan sax ahayn ama tiro ma aha qaab sax ah la area code
-abuurey kale waa marka hal qof oo aad u diraya fariin ah in aan helo fariinta. Tani waxay sida caadiga ah wax dhibaato ah oo qalab qaataha iyo ma idinkaa iska leh.
Awoodda in ay qoraal si toos ah oo la xiriira awood u leeyahay inuu sameeyo taleefan. Haddii kama dhigi kartid telefoon kasta, markaa ma awoodi doonaan in ay ama qoraal aad.
Si la dhibaatooyinka tani la macaamili halkan qaar ka mid ah waxyaalaha aad u baahan tahay in la sameeyo.
Tani waa tii ugu horaysay iyo talaabada loo baahan yahay in aad u baahan tahay in aad qaadato marka aad dhibaato noocan oo kale ah. Waxaad u baahan tahay in la sameeyo reboot adag ee qalab aad. Si tan loo sameeyo, hoos u qaban button Home iyo button Power on your iPhone in muddo ah ilaa logo Apple mar kale u muuqataa.
2. goobaha network Warbixannada
Apple soo bandhigay SMS gudbinta oo qayb ka ah feature Socota ay. Habkaani wuxuu kuu ogolaanayaa inaad u soo dirto oo aad hesho farriimo cagaaran xumbo on iPad iyo Mac. Dhibaatada Fariin A dhici kara haddii ay jirto arin la xidhiidha u dhexeeya qaar ka mid ah qalabka ah. Si gab soo gudbiyo, waxaad u baahan tahay in la raaco tallaabooyinka soo socda ee fudud oo
a.On aad iPhone, abuurtaan app Settings iyo guji Guud
b.At hoose ee bogga soo furan, garaac Warbixannada.
c. Riix Warbixannada goobaha Network
d. Guji Oo Xaqiijisay on suuqa kala gujisid iyo aad deice reboot doonaa
3. lagaala SMS Disable wax kasta oo
a.Launch app Settings iyo guji Messages
b.On amarka soo gudbiyo qoraalka ah, dami gudbinta qalabka oo dhan iyo reboot qalab aad
4. Soo Celinta qalab iPhone aad
Haddii wax walba oo aad isku dayday ayaa ku guuldareystay, ka dibna doorasho kaliya ee hadhay waa in la damiyo iPhone.
Celinta aad iPhone isticmaalaya Lugood. Waxa kale oo aad ka tirtiri kartaa iPhone fog, waa in aan la isticmaalayo computer ah.
Waxaad markaa keeni kartaa ilaa aad gurmad isticmaalaya iCloud.
Marka laga reebo xal ah, halkan waxaa ku qoran waxyaabo kale oo aad u baahan tahay inaad samayso.
a.Check haddii aad wici kartaa sida yeedhayso la xiriira qoraalka. Waxay labada shaqeeyaan on shabakad isku
b.Check haddii ay tahay hal qof oo kaliya oo aan ku heli karo fariimaha aad. Haddii ay sidaas tahay, markaas aad heshay dhibaato lahayn, ha hubi qalabka ay.
c.Ensure in tirada dadka qaata iyo code degaanka waa in qaab sax ah
d.Ensure in aad leedahay qoraalka ah ayaa koriyey, qorshaha gacanta MTS
iMessage waa adeeg Fariin Apple oo bixiya awoodda ay u soo dirto oo aad hesho farriimo ka mid qalab tufaax in kale. Adeeggani waa lagu kalsoonaan karo qalabka aan taageeri fariimaha SMS si joogto ah sida iPhone. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira qaar ka mid jeer (naadir dabcan) marka iMessages u muuqdaan in ay joojiso shaqada iyo aan kuu soo diri karaan ama ay helaan iMessages.
Hoos waxaa ku qoran qaar ka mid ah xaaladood in looga hortago kartaa iPhone soo diridda iyo helidda iMessages.
Waxaad u demiyo iMessages sababtoo ah waxaad doonayay in ay helaan oo dhan oo ah qaab fariimaha qoraalka SMS sidaas aadan iMessages ka isticmaala iPhone heli kartaa.
Seenyada kale waa marka aad hadda u wareegay oo ka iPhone telefoon.
IMessages ay joojiyeen laga yaabaa shaqaynaya oo aadan horay u baaro waxa on.
Si loo xaliyo dhibaato noocan ah, waa kuwan qaar ka mid ah waxyaalaha aad u baahan tahay inaad samayso haddii aad si ay u la kulmaan.
Hubi in aad ku xidhan yihiin internet . Si aad u hesho iMessages, si loo hubiyo in qalab aad xiran internetka labada network xogta gacanta ama ay Wi-Fi. Ma heli karaa iMessages aan xidhiidh kasta oo internet.
Hubi goobaha aad. Hubi goobaha fariin ah qalabka si loo hubiyo in aanay la bedelay. In sidaa la yeelo, G in goobaha app> fariimaha iyo dhigay slider iMessages in ay booska On.
Marka on yahay, dooro dir & Hesho. Your iPhone ee Apple id waa in laga arki ee qaybta sare ee daaqadda.
Dib u celi iMessage. haddii aad dareentid in goobaha oo dhan waa qumman yihiin, waxaa suuro gal ah in aad iPhone ayaa laga badiyay la xidhiidha server iMessage ah. Si aad dib, u tag Settings, ka dibna ku Messages tuubada dir & Aqbala ka dibna ee "Waxaad la tagi karaa iMessage ee" qaybta, haddii cinwaanada emailka ayaa lagu eegaa, ka dibna iyaga uncheck.
On ID Apple aad, dooro saxeexaan
Waxa soo socda si ay u sameeyaan waa in ay dib qalabka. Press iyo hay badhanka hurdada / dib markii la button Home 10 toban ilbiriqsi ah. Continue haysta hoos badhamada ilaa logo inankeeda u muuqataa.
Daar slider iMessage iyo saxiixato. Hawshooda u iMessage waa sii sida caadiga ah.
Ugu dambeyntii u tag Settings> fariimaha dooro dir & Hesho iyo in la hubiyo in aad soo xulay cinwaanada email in aad rabto in aad isticmaasho u iMessages ah.
Ugu dambayn , ku noqo shaashad iyo demi slider iMessage ah
> Resource > iPhone > Sida loo hagaajin iPhone ma diraya ama qaata dhibaatooyinka fariimaha qoraalka ah